Toriteny alahady 01 jona 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny alahady 01 jona 2014
Isaia 42:5 – 9 / Matio 11:2-6 / Asan’ny Apostoly 12:1-10
Fa Iza moa Andriamanitra no afaka mamaha fatorana, ary n’inona n’inona endriky ny fatotra, voavahany ve?
Tena asan’Andrimanitra ny mamaha ny fatoran’ny olona tsirairay. Manasa anao hanaraka tsara ny Isaia 42:5 – 9 izay hanambaran’Andriamanitra ny fomba fiasany eo amin’ny fiainanao hamahany ny fatopatotra rehetra.
1- Te hampahafanatatra ny Fiangonana Andriamanitra fa manana fahefana any amin’izany Izy
cf and 5 : Matoa toy izao ny tany, misy zavamaniry sy ny zava miaina rehetra izay ahafahantsika mivelona sy miaina dia noho Izy Andriamanitra. TENA LEHIBE NY ANDRIAMANINTSIKA .
Andriamanitra manana ny maha Izy Azy Izy sy ny fahalebiazany ny Andriamanitra hivavahantsika, eo an-tanany ny fahefana rehetra amin’izay noharian’ny ny tanany, anisan’izany izaho sy ianao, antoka izany fa, izay rehetra mahakasika ny fiainantsika dia efa eo ambany masony, anisan’izany ny fatotra mangeja antsika amin’ny fiainana, Izy Jehovah ilay hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay irery ihany no manana ny fahefana hanafaka antsika amin’izany.
Hafatra : Zanak’Andriamanitra isika, asan’ny tanany ka adidiny ny mikarakara ny fiainantsika, isan’izany ny mampitoetra antsika ho amin’ny fahafahana tanteraka.
2- Olom-boafidin’Andriamanitra ianao
Manana anjara toerana lehibe eo amin’Andriamanitra izany hoe olom-boafidy izany hany ka tsy avelany andeha ho azy amin’izao ny fiainany ; hamarininy amin’ny Teniny izany fa “Izay nofidiako hoy Izy tsy mba ariako”. Omen’Andriamanitra lanja manokana ny olona efa nantsoiny ho Azy, ary tena asainy miankina tanteraka Aminy. N’inona n’inona mampitanondrika, manahiran-tsaina amin’ny fiainana dia Jesoa Kristy ihany no vaha olana .
Hafatra : Te ho afa patorana ve ianao ? Ataovy ary izay ahatonga anao ho isan’ny Zanak’Andriamanitra. Ataovy ny ezaka rehetra hanaporofonao Aminy fa akaiky ny fonao Izy. Mianara manankina ny fiainanao tanteraka Aminy hatramin’ny zavatra madinika indrindra ka hatramin’izay heverinao ho lehibe indrindra eo amin’ny fiainanao. Andramo ange de ho hitanao e!
3- Tena asan’Andrimanitra ny mamaha ny fatorana
cf and 7 : Fahefana sy andraikitr’Andriamanitra manokana ny famahana ny fatotra amin’ny fiainan’ny olona iray. Hamafisiny ao amin’ny Isaia 58:6-12 fa ny fifadiana izay ankasitrahan’Andriamanitra ny famahana ny fatorana, ka na dia ao anatin’ny fahasahiranana mangitsokitsoka aza dia mahita ny mazava izay miaraka Aminy. Ity Isaia:42 ity no fahatanterahan’ny Testamenta Vaovao, mitsangana ny malemy, madio ny boka, malady ny marenina …..
Hafatra: Raha izay no maha Izy Azy an’Andriamanitra, raha efa nanolo-tena ho an’ny Tompo ianao dia ho vahany amin’ny fatorana ary antsoiny ho mpiara miasa Aminy koa ; hamaha ny fatoran’ny hafa amin’ny alalan’I Jesoa Kristy. Tena asan’ny Fiangonana io .
Lesona : Mitaona anao ny Tenin’Andrimanitra hamantatra ny amin’ny tenanao, inona no mbola fatotra eo amin’ny fiainanao manakana na tsy ahafahanao mitsanga ? olana, aretina, adilahy sns…
Mavesatra lavitra noho ireny ny fatotra ara-panahy izay manary any amin’ny elo mandrakizay ; koa manatona ny Tompo fa Izy ihany dokotera mahomby indrindra hamaha anao amin’ny fatorana
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen ! ,
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 3 juin 2014